Nabad-Ilaaliyeyaasha Kenya Waa Cadow gudaha oo ay soo Dirsatay Dowlad Cadow ah
Nabad-ilaaliyeyaashu waa in raali uu ka yahay dalka ay tegayaan, iyo inaysan isticmaalin awood ka badan isdifaacooda.
Nabad-ilaaliyeyaasha Kenyan Waxay Soomaaliya ku joogaan inay qayb ka yihiin Howlgalka nabad-ilaalinta Midowga Africa. Waxaana laga filayey inay difaacaan. Hanaanka dib-usoo noolaynta dowladnimada iyo nabadda soomaaliya, Iyo inay gacan ka geystaan dagaalka lagula jiro argagixiso gobolka dhibaato ku ah.
Nasiib darro nabad-ilaaliyeyaashaan oo ay halkan usoo dirtay dowladdooda oo doonaysa inay Soomaaliya dhul ka qabsato. Waxay jebiyeen dhammaan xeerarka nabad-ilaalinta Qaramada Midoobay iyo nidaamyada kale ee laysku raacsan yahay.
Xeerka nabad-ilaalinta Qaramada Midoobay wuxuu leeyahay nabad-ilaaliyeyaashu waa inay dhexdhexaad yihiin. Raali uu ka yahay dalka ay tegayaan, iyo inaysan isticmaalin awood ka badan isdifaacooda.
Waxaa kaloo intaas dheer. Sharciga Ururka Midowga Africa. Qodobkiisa seddexaad wuxuu si cad u qeexayaa in dal. Afrikaan ahi uusan faragelin arrimaha gudaha ee dal kaloo Afrikaan ah.
Waxaa intaas sii dheer. Qaynuun cusub oo Midowga Africa ka dhaqan galay. Intii u dhaxay bishii Nofeebar 2000 ilaa Maajo 2007-da qodobkiisa seddexaad. faqraddiisa b). Wuxuu leeyahay waa in Modowga Afrika uu difaacaa madaxbanaanida, xaduudaha iyo xorriyadda dal kasta oo xubin ka ah midowgaan.
Meeshii nabad ilaaliyeyaasha Kenya ay ka xushmayn laahaayeen qaranimada Soomaaliya. Ugana caawin lahaayeen dalkaan ay deriska yihiin sidii uu uga soo kaban lahaa burburkii tobanaanka sano ee dagalaada sokeeye. Waxaay la yimaadeen cadaawad. Qalalaase siyaasadeed. Burbur iyo bahdilayn ay kula kaceen dadka Soomaaliyeed iyo hoggamiyeyaashooda.
22-Kii Agoost 2019 Nabad-Ilaaliyeyaasha Kenya ee fadhigoodu yahay. Gobolka Jubbada Hoose ee Soomaaliya waxay qarxiyeen xarun Isgaarsiin oo shirkadda Hurmood Telecom ku lahayd degaanka Kurun ee Gobolka Gedo. Bishii Luulyo sanadkii 2018 Ciidamada Kenya oo isticmaalaya hoobiyeyaal waxaay duqeeyeen siiman isgaarsiin oo Hurmood Telecom ku lahayd Ceelwaaq oo ah magaalo ku taal koofurta Soomaaliya.
Waxaa intaas dheer. Sida shirkad Hurmood war saxaafadeed soo baxay 24-kii Agoosto ku sheegtay ciidamada Kenya waxay horay u burburiyeen 11 siiman isgaarsiineed oo shirkaddu ay lahayd.
Howlgalka cadowtinamada leh ee askarta Kenya kuma koobna cuuryaaminta kaabayaasha dhaqaalaha dalka. Laakiin askartaani. Waxay si weyn u farageliyeen arrimaha gudaha iyo siyaasadda dalka.
Waxay saldhig ka samaysteen mid ka mid ah magaalooyinka ugu muhiimsan Soomaaliya waxayna magaaladaas ka samaysteen hogaamiye danahooda u adeega oo ay ku rikaateeyaan dowladda federalka taagta daran ee Soomaaliya.
Waqtiyadii lasoo dhaafay waxaan arkaynay saraakiil ka socota Dowladda Federalka Soomaaliya oo loo diiday inay magaalada galaan amaba ciidamada Kenya ay sharaf dileen.
Waxaa cajiib ah in Kenyaanku Kismaayo maamulaan,. Kana samaystaan xarun waxaay rabaan ka fuliyaan. Waa wax aan caadi ahayn in dal nabad-ilaaliyeyaal u diro dal kale si uu magaalo uga qabsado dalkii la caawinayey, kadibna magaaladaas u isticmaalo sida dhul uu dibadda ku leeyahay. Tani waa waxa ka dhacaya magaalada dekedda leh ee Kismaayo taasoo u gacan gashay Kenyaanka, madaxda midowga Afrikaankuna way ka aamusan yihiin waxa Kenya ka samaynayso gudaha Soomaaliya.
Kenya waxay Soomaaliya kula jirtaa dagaal dhul, waxayna qalalaase siyaasadeed ka ridday dalka kadib markii la hayste ahaan u qabsatay Kismaayo, ayna darbi ku kala qaybisay dadka Soomaaliyeed, haddana ay waddo dadaal siyaasadeed, mid diblomaasi iyo mid ciidan oo bad iyo dhul uga qaadanayso Soomaaliya.
Dadka Soomaaliyeed waa inaysan ogolaan riyada Kenya. Soomaalidu waa inay garab istaagaan Dowladda Federalka taagta daran ee Soomaaliya iyo qabiilooyinka soomaaliyeed ee degan gobolada Jubbada Hoose iyo Gedo. Waxaa waajib ku ah qof kasta iyo qabiil kasta oo Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in meel layska dhigo qilaafka gudaha, loona midoobo in dalka laga difaaco cadowga weerarka ku ah. Dhulka Soomaaliyeed Soomaaliga ayaa leh.
By Cumar Diini